Nhoroondo Kambani | Shijiazhuang Yungong Machinery Technology Co., Ltd.
The kambani iri ainyanya kuita zvakarurama Kudzingwa uye chikafu michini kugadzira. Investment yekukanda maitiro ndeye silicon sol, iine gore rinobuda rinosvika mazana matatu ematani e castings. Izvo zvinoshandiswa zvinosanganisira ese ese esimbi simbi, kabhoni simbi, yakaderera alloy simbi uye mamwe akakosha maalloys uye duplex isina simbi simbi. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya muValves pumps impellers pipe fittings, mota chikamu, chikafu michina, chicherwa michini zvishongedzo, Hardware chishandiso zvigadzirwa uye simbi kushongedza.
Precision investment cast zvigadzirwa zvinozivikanwa nehunhu hwazvo uye kuvimbika mune chero chishandiso chavakagadzirirwa. Maitiro edu anogona kugadzira akaomarara zvinhu uye zvigadziro zviri nyore.
Kuchengeta kwekudyara kukanda kune zvakawanda zvakanakira, kusanganisira: Yakanyatsotsanangurwa chikamu chekugadzira / Kuderedzwa kwekugadzirwa kwemitengo / Machine uye gungano zvinodiwa / Iko kushandiswa kweakasiyana siyana maalloys.
Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, America uye mukati menyika.
Boka redu muridzi ano mureza chirimwa, pamwe simba rwokugadzira simba, nemasango michina, yemhando nemazvo Kudzingwa kugadzira uye kuyedzwa michina. Nemakore ekunze ekutengesa ruzivo, kuti akupe iwe yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi, ukuwo uchipa vatengi vane yekutanga-kirasi zvigadzirwa.
Isu tinokwanisa kupa hombe kana diki (kubva pa5g kusvika pa30kg nechidimbu) uye sarudzo dzakaomarara dzekukanda. Chikwata chedu chehunyanzvi chinogadzira hunyanzvi hwekuona kuti yedu chaiyo yekukanda mhinduro inogara ichiita zvaunotarisira.
• Nyanzvi yehunyanzvi inokubatsira kugadzirisa mhinduro yese kubva kune zvigadzirwa dhizaini, kurasa, kugadzira machira ekupisa, kurapwa kwepamusoro, uye zvichingodaro kudzikisa mutengo wako.
• Kutarisa nzvimbo munzvimbo imwe neimwe uye 100% yekupedzisira kuongorora.
• Tungamira kuendesa kune vatengi vekunze.
• Zvinonzwisisika kutaurirana kweChirungu uye airport inotora sevhisi.
Hunhu: Kukanda kubwinya
Innovation: Kambani mweya